भेनेजुयला को खाडी | Absolut यात्रा
भेनेजुएला को खाडी
दानियल | | क्यारिबियन
El भेनेजुएला को खाडी (वा कोलम्बियन्सका लागि कोकिवाकावाको खाडी) दक्षिण अमेरिकाको उत्तरमा अवस्थित पानीको शरीर हो जुन यसको ठूलो अनुपातमा क्षेत्रीय पानी ओगट्छ। भेनेजुएला. खाडीको सानो हिस्सा ला ग्वाजीरा डेको तटमा अवस्थित छ कोलम्बिया, यसैले दुई देशहरू बीच धेरै विवाद भएको छ किनकी उनीहरूले परिभाषित गर्न सक्दैनन् समुद्री सीमा.
एक संकीर्ण च्यानल मार्फत माराकाइबोको खाडीसँग जोडिएको, भेनेजुएलाको खाडी दक्षिण अमेरिकी प्लेटमा अवस्थित छ जहाँ यो क्यारेबियन प्लेटको साथ टकराउँछ। यसको गहिराई १ 15 र meters० मिटरको बीचमा छ।
1 भेनेजुएलाको खाडीको अन्वेषण र भूगोल
2 भेनेजुएलाको खाडीबाट तेल
3 कोलम्बियासँग क्षेत्रीय विवाद
भेनेजुएलाको खाडीको अन्वेषण र भूगोल
भेनेजुएलाको खाडीमा पहिलो अन्वेषण अभियान सन्‌ १1499 देखि सुरु भयो। यी पानीहरूको नेभिगेट गर्ने पहिलो यूरोपीयन स्पेनिश थिए। एलोन्सो ओजेडाकार्टोग्राफरसँगै जुआन डे ला कोसा र इटालियन नेभिगेटर द्वारा अमेरिका भेसपुसियो। दुई वर्षपछि स्पेनका राजाहरूले ओजेदालाई मुख्य भूमिमा बसोबास गर्ने अधिकार दिए। यो महादेशमा औपनिवेशिक बस्ती स्थापना भएको पहिलो पटक थियो, त्यसबेलादेखि यो केवल क्यारिबियन टापुहरूमा भएको थियो।
यस क्षेत्रमा स्पेनी उपस्थितिको पहिलो बर्षहरूमा यस क्षेत्रलाई चिनिन्थ्यो कोक्विवाकोआ, जुन सम्भवत एक स्थानीय जनजातिलाई जनाइएको छ। पहिले नै सत्रौं शताब्दीमा, भेनेजुएलाको खाडीको कुरा गर्ने पहिलो कागजातहरू यसको हालको नामको साथ देखा पर्दछ।
यद्यपि यस सम्बन्धमा केही विवादास्पद भए पनि, "भेनेजुएला" शब्दको परिणामको रूपमा उत्पन्न हुन सक्थ्यो स्वदेशी स्टिल्ट घरहरूको उपस्थिति समुद्री तटमा। यी निर्माणहरूले समुद्री किनारमा नहरहरूको नेटवर्क खडा ग Europe्यो जसले युरोपियनहरूलाई भेनिसको नहरहरूको सम्झना गराउँथ्यो। यी नयाँ देशहरूलाई "भेनेजुएला" भनिन्छ, भन्नुको मतलब "सानो भेनिस"।
भेनेजुएला को खाडी को नक्शा
भेनेजुएलाको खाडी को सीमा द्वारा गुआजिरा प्रायद्वीप (कोलम्बिया) पश्चिममा र पराग्वे पेनिन्सुला (भेनेजुएला) पूर्वमा। उत्तरमा भिक्षुहरूको द्वीपसमूह यो खाडी र क्यारिबियन समुद्री पानीको बीचको प्राकृतिक सीमा मानिन्छ। दक्षिणमा भेनेजुएलाको जूलिया र फाल्कन राज्यहरूको किनार। तिनीहरू बीच माराकाइबो च्यानल, जसले खाडीको पानीलाई तीसँग जोड्दछ माराकाइबोको खाडी, भेनेजुएलाको आन्तरिक समुन्द्रको एक प्रकार।
पूर्व देखि पश्चिम सम्म, खाडी २ 270० किलोमिटर लामो छ। क्षेत्र मा मुख्य पोर्ट छन् माराकाइबो र पन्तो फिजो, दुबै भेनेजुएला क्षेत्र।
भेनेजुएलाको खाडीबाट तेल
भेनेजुयलाको खाडीमा छ एक महान रणनीतिक र आर्थिक महत्व। रणनीतिक तहमा, किनकि यो माराकाइबोको खाडी र एट्लान्टिक महासागर बीच जोड्ने मार्ग हो; आर्थिक रूपमा, यसको महत्वपूर्ण झोलाको समुद्री किनार मुनि उपस्थितिको कारण तेल र प्राकृतिक ग्यास.
अमुए रिफाइनरी, भेनेजुएलाको सबैभन्दा ठूलो
भेनेजुएलाले यी प्राकृतिक स्रोतहरू, मुख्यतया तेलको शोषण गर्दछ। यस क्षेत्रको कच्चा तेल को निकासी मुख्य आर्थिक गतिविधि हो। असंख्य रिफाइनरिजहरु। यी मध्ये सबैभन्दा ठूलो हो अमुवाय, जसको आफ्नै पोर्ट पनि छ र जुन देशको सब भन्दा ठूलो शोधन केन्द्र हुन जान्छ। दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रिफाइनरी भनिन्छ कार्डन, पराग्वे प्रायद्वीपको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित छ।
भेनेजुएलाको अर्थव्यवस्थालाई निरन्तरता दिन तेलबाट प्राप्त सम्पत्ति आवश्यक छ। यद्यपि खाडीमा यो उद्योग रहेको छ दुई नकारात्मक नतिजा:
एकातिर, क्षेत्र को वातावरणीय गिरावट, यसले असंख्य कोरल चट्टानहरूको गायब हुनु र तिनीहरू बसोबास गर्ने थुप्रै प्रजातिहरूको लोप हुने खतरामा अनुवाद गर्दछ, जस्तै स्पंज र समुद्री कछुए।
अर्कोतर्फ, छिमेकी कोलम्बिया संग क्षेत्रीय संघर्ष प्राकृतिक संसाधनहरूमा पहुँचको खातामा।
कोलम्बियासँग क्षेत्रीय विवाद
भेनेजुएलाको इलाकामा पूर्ण रूपमा रहेको भए पनि त्यहाँ एउटा ऐतिहासिक कुरा छ कोलम्बिया र भेनेजुएला बीच तनाव गल्फ को सार्वभौमिकता र नियन्त्रण को खाता मा। प्रत्येक देश आफ्नो हितको रक्षा गर्दछ तर्कहरू तौल को:
खाडी पानीमा कर्भेट क्यालडासको प्रवेशले १ 1987 XNUMX मा कोलम्बिया र भेनेजुएला बीचको गम्भीर घटना घटायो।
कोलम्बियन्सका अनुसार भेनेजुएलान्सले क्षेत्रीय पानीको सीमा स्थापना गर्न सन्दर्भको रूपमा भिक्षुहरूले भनिने द्वीपसमेत लिन सक्दैनन्। यस प्रकार, कोलम्बिया भेनेजुएलाको खाडीको पानीको राम्रो भागसँग मिल्दछ, विशेष गरी उत्तरी आधामा। यद्यपि भेनेजुएलाहरूले यस सन्दर्भलाई मान्य मात्र नभई उनीहरू भेनेजुयला खाडीको आन्तरिक पानीको समग्रता पनि दाबी गर्छन्।
सुल्झाउनु भन्दा टाढा, यो असहमति समयको साथ जारी रहन्छ, र यसले बढावा दिन्छ विशेष गरी दुबै देशहरू बीच तनावपूर्ण क्षणहरू। यस टकरावको "चर्चित" घटना अगस्त 9, १ 1987 .XNUMX मा भएको थियो। त्यो दिन कोलम्बियाको कर्वेट कलडास भेनेजुएलाको सीमा नाघेको सीमा नाघेर खाडीमा प्रवेश गरे। दुवै पक्षले सेनाको परिचालनसँगै स The्कट सशस्त्र द्वन्द्वमा बढ्ने खतरा छ। भाग्यवस, उनले कोर्भियाको पानीमा कर्वेट फर्किएपछि युद्धको अन्त्य रोक्न सके।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » भेनेजुएला को खाडी
भारादेरोमा अल क्यापोनको घर
क्यानाडा मा आमा दिवस